शुक्रवार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भेटेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, 'परिस्थिति धेरै गम्भीर छ ।' पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन निरन्तर खटिएका महासचिव पौडेलले देखेको 'गम्भीर परिस्थिति' त्यसयताका ३ दिनमा सामान्य हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले प्रस्तावका रूपमा ल्याएको 'आरोपपत्र'को एक-एक जवाफ दिने बताइसकेका छन् । उनले आफ्नो सल्लाहकार टीमलाई जवाफ तयार गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।
पार्टी विभाजन हुने छनक पाएरै जिल्ला-जिल्लामा रहेका कार्यकर्ताहरूबीच मनमुटाव बढिरहेको छ । शनिवार पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे उपस्थित कार्यक्रममा ओलीपक्षीय कार्यकर्ताहरूले होहल्ला र नाराबाजी गरे । शनिवार नै सुर्खेतमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को ब्यानरमा खुल्ला रूपमा कार्यक्रम गरियो ।
स्रोत भन्छ - 'पार्टी विभाजन हुने स्पष्ट आधारसहित तयारीमा रहन ७७ वटै जिल्लाका ओलीनिकट नेता कार्यकर्तामा अनौपचारिक सर्कुलेसन पुगेको छ ।'
यससँगै चितवनमा पाण्डेमाथि गरिएको दुर्व्यवहार अन्त पनि दोहोरिन सक्ने खतरा बढेको छ । शनिवारको घटना नदोहोरियोस भनेर पाण्डेले पोखराको एक रिसोर्टमा आइतवार गोप्य कार्यक्रम गरे । आइतवारको कार्यक्रममा ओलीनिकट नेता कार्यकर्ताहरू नछिरुन् भनेर विशेष सजगता अपनाइएको थियो ।
केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको सक्रियता पनि व्हात्तै बढेको छ । शनिवार मात्र ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग ३ घण्टाभन्दा बढी छलफल र कुराकानी गरेका छन् । संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा कुरा गरिएको औपचारिक जानकारी आएपनि विभिन्न स्रोतहरूले दुई नेताबीच 'पावर सेयरिङ'का विषयमा पनि छलफल भएको जनाएका छन् ।
'माधव नेपालले धेरै पहिलादेखि दुख दिएका हुन्, दुख दिनेमा अहिले प्रचण्ड पनि थपिएका छन्,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'बरू प्रतिपक्षी भएपनि तपाईंले दुख दिनु भएको छैन । मेरो पार्टी फुट्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । त्यसपछि तपाईको र मेरो सत्ता सहकार्य हुनुपर्यो ।'
जवाफमा देउवाले अन्य विषयमा ओलीलाई सहयोग गर्ने तर सत्ता सहकार्यको विषयमा अन्य नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
दुई नेताबीच भएका कुराले बाहिर भ्रम छरेको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता सहकार्यको विषयलाई खण्डन गरेका छन् । आइतवार ट्वीटरमा लेख्दै शर्माले ५ वर्ष विपक्षमा बस्ने जनताको जनादेश रहेकाले कुनै पनि भड्कावबाट टाढा रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
आइतवार ओलीले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेका छन् । पार्टीको शक्तिसंघर्ष गम्भीर मोडमा पुगेका बेला ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग गरेको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ । केही दिनअघि ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
ओलीको सक्रियतालाई कतिपय नेताहरूले 'धम्क्याउने प्रयोजनका लागि गरिएका क्रियाकलाप'को संज्ञा दिएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, 'उहाँले धम्कीको अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको छ । गत वैशाख र भदौमा उहाँको धम्कीले नेताहरू डराएका थिए तर अहिले डराउन्नन् ।'
उनले पार्टी नफुट्ने ठोकुवा गरे । 'पार्टी विभाजन पनि अहिले ओलीकै हातमा छ, एकता पनि उनकै हातमा छ,' ती नेताले भने, 'विभाजन गर्ने हो भने गरे भइहाल्यो । प्रचण्डले लगाएका आरोपको जवाफ किन लेख्नुपर्यो ?'
ओलीनिकट मानिने संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टी एकताको रक्षाका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । 'म अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित संवादमा छु । उहाँले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ । डोरी चुडिएको छैन भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले आशा गरौँ, पार्टी एकढिक्का रहन्छ,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।
उनले सकेसम्म प्रचण्डले प्रस्तावका रूपमा ओलीलाई लगाएको आरोप फिर्ता लिन लगाउने पहल भइरहेको बताए । 'प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो भने ओलीले किन त्यसको जवाफमा समय खर्चिनु पर्यो र ?' नेम्वाङले भने, 'प्रस्ताव फिर्ता नभएको खण्डमा ओलीले पनि जवाफ दिनुहुन्छ । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुन्छ ।'
पार्टी एकताको पक्षमा अभियानकै रूपमा दौडधूप गरिरहेका प्रचण्डनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पार्टी गम्भीर मोडमा रहेको बताए । उनले गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न ओली तयार नभएपछि समस्या शुरू भएको बताए ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै गजुरेलले भने, 'यसअघिको समस्या ओलीविरुद्ध घेराबन्दी भएका कारण सिर्जित थियो भने अहिलेको समस्या स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न ओलीले आनाकानी गरेपछि सिर्जना भएको हो । स्थायी कमिटी बैठकले ओलीकै पक्षमा निर्णय गरेको थियो । उहाँ (ओली)ले त्यसलाई अवज्ञा गर्नु सही थिएन ।'
पार्टी एकतालाई अखण्ड राख्न गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले ओली र प्रचण्ड दुवैतिरको भेटघाट सघन बनाएका छन् ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने तयारी गरिरहेको छ । सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रचण्डले 'त्याग' गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसैका आधारमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने र महाधिवेशनसम्म लैजाने तयारी प्रचण्ड-नेपाल समूहको रहेको स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् ।
नेकपाको सचिवालय बैठक यही १३ गते डाकिएको छ । सचिवालयमा स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय, प्रचण्ड-नेपाल समूह र ओलीबीच आदानप्रदान भएका चिठीपत्र, प्रचण्डको प्रस्ताव र ओलीले ल्याउने भनिएको प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।